သမိုင်းဝင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီ တော့မည့် ကမ္ဘာ ကျော်အမှတ် တံဆိပ် Luxury ကားကုမ္ပဏီ Rolls-Royce ၏ SUV မျိုးဆက်သစ် Rolls-Royce Cullinan
Billionaire တွေအကြိုက် အထက်တန်းလွှာ မော်ဒယ်တွေကို သာထုတ်လုပ်ရောင်းချနေရာမှ ယခုအခါတွင် အဆင့်မြင့် ဇိမ်ခံကားသစ်တစ်မျိုးကို Rolls-Royce မှ ထုတ်လုပ်တော့မှာဖြစ်သည်။ Luxury British Brand ကားအမျိုးအစား တစ်ခုတည်းကိုသာ ထုတ်လုပ်ရောင်း ချနေသည့် Rolls-Royce ကားကုမ္ပဏီသည် ယခုအခါတွင် SUV အမျိုးအစား အသစ်ဖြစ်သည့် Rolls-Royce Cullinan ကိုစတင်ပွဲထုတ် ပြသခဲ့ပါသည်။ !(/redline/content/images/2018/05/3-2.jpg) Rolls-Royce အနေ နဲ့ အရင်က လေးဘီးယက် စနစ်တွေကို ထုတ်လုပ် ရောင်းချတာမျိုး မရှိခဲ့တာကြောင့် ရုန်းကန်အား ရယူမဲ့ စနစ် အနေအထားလေးကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဒီလို high body vehicle မော်ဒယ်တွေကို မထုတ်လုပ်ဖူးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီသက်တမ်း နှစ် ၁ဝဝ ကျော်အတွင်း အနေအထားမှာ ထုတ်လုပ်မှုမရှိတာ ကြာမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြသင့်စရာ တစ်ခုကတော့ ဈေးနှုန်းတန်ကြေးအားဖြင့် စတာလင်ပေါင် £200,000 နှင့်အထက် ကျသင့်မဲ့ Rolls-Royce Cullinan က ငွေကြေး သုံးစွဲမှု မြင့်မားတဲ့ လူငယ် လူရွယ်တွေ အတွက် ဦးတည် လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rolls-Royce ရဲ့ CEO ကိုယ်တိုင် က သူတို့ရဲ့ Target သည် Younger Customer ဖြစ်တာကြောင့် လူငယ်ရွယ် တွေအကြိုက် င်္ဒီဇိုင်းဘက် ပိုမို ဦးတည်လာရခြင်းဖြစ်တယ် လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါတွေထက် ယခု ဈေးကွက်ကို ဖြန့်ချီတော့ မယ် SUV အမျိုးအစား သစ် Cullinan က SUV တန်းဝင် ပုံစံမျိုးဖြင့် ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက် လာမှာဖြစ် တဲ့အပြင် ဇိမ်ခံကားဆိုတဲ့ အခြေအနေ ထက် ပိုမို အဆင့်မြင့်တဲ့ ဇိမ်ခံကား ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ !(/redline/content/images/2018/05/r.jpg) များသောအားဖြင့် Rolls-Royce ကားတွေမှာဆိုရင် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီ ကို အသေးစိတ် ကျကျ တပ်ဆင်တည်ဆောက် ထားတာကို တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ Rolls-Royce မော်တော် ကားတွေရဲ့ အခြေခံ သဘော သဘာဝကို သိရှိပြီဆိုရင်တော့ ယခု ရှင်းပြပေးမဲ့ Rolls-Royce ရဲ့ SUV မော်ဒယ် အသစ် Cullinan ကို တစ်ချက် ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။
Rolls-Royce Cullinan ရဲ့ ဒီဇိုင်းကိုယ်ထည် ကို SUV ပုံစံ နဲ့ ချိုးစစ်တာဖြစ်ပြီး ပြိင်ဘက် Company တွေ ဖြစ်တဲ့ Maybach, Bentley, Aston Martin တို့ကို အပြိုင် လိုက်လှမ်းလာတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည် ဒီဇိုင်း အပိုင်းမှာ တော့ ယခင် ထွက်ရှိပြီး မော်ဒယ် အမျိုးအစား Rolls-Royce Ghost မော်ဒယ်ထက် အလျား2mm ပိုမို ရှည်လျားပြီး ရှေ့ဘီး နောက်ဘီး ကြားအကွာအဝေး(Wheelbase) မှာတော့ Range Rover ထက် 80 mm နည်းသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ အနောက်ဖက်ခန်း Luggage area မှာ တော့ ခလုတ် တစ်ချက် နှိပ်ရုံ နဲ့ အလိုအလျောက် ခေါက်သွင်းနိင် တဲ့ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံးက ( Viewing Suite) အနေနဲ့ ပါရှိလာမှာဖြစ်တယ်။
Rolls-Royce Cuillinan ရဲ့ အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်း တည်ဆောက်ပုံကတော့ ပုံမှန် သုံးနေကျ အတိုင်း အကောင်းမွန်ဆုံးသော သစ်အသား ၊ leather အစရှိတာတွေကို အချိုးကျကျ ပေါင်းစပ်ထားတာကို မြင်တွေ့နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အတွင်းပိုင်းနည်းပညာမှာတော့ အကောင်းဆုံး အနေအထား ရှိနေတာကို တွေ့ရပြီး BMW ကားတွေမှာပါရှိထားတဲ့ iDrive နည်းပညာ အတိုင်း Rolls version system ကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင် မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Engine ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် စွမ်း ဆောင်ရည်
အင်ဂျင်ပိုင်းမှာတော့ ယခုထွက်ရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်တွေမှာ 6.8 litre twin turbo V12 အင်ဂျင်တွေကို ဘဲ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် လာဖို့ ရှိနေပြီး လက်ရှိ အင်ဂျင် အနေအထားရ စွမ်းရည် ထုတ်လုပ်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်လာပြီး အရုန်းအထွက် ပိုမို ညင်သာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Rolls-Royce Cullinan ရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းကို ရွေးချယ်စရာအနေဖြင့် Hybrid နည်းပညာ ထည့်သွင်းလာမယ့် အရိပ်အယောင်ကို တွေ့ရပါတယ်။
လုံခြုံမှုအပိုင်းမှာတော့ အရင်ကတည်းက ကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီး ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အခု မော်ဒယ်အသစ်မှာ အထူးတစ်လည် ပြောဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မောင်းနှင်မှု အပိုင်းမှာရော air bag system တွေကို ပါ Rolls Version drive system နဲ့ ချိတ်ဆက် ပြီးသား ဖြစ် တဲ့အပြင် အကူစနစ်တွေကို ပါ ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။
ဒါဆို Rolls-Royce Cullinan က ကုမ္ပဏီမှ ကနဦး ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း သမိုင်းထွင်လောက် အောင် လူကြိုက်များတဲ့ မော်ဒယ် အမျိုးအစား ဖြစ်လာပါ့မလား။ ဒါ့ထက် order မှာပြီးပြီဆိုရင်တောင် ကံကောင်းရင် ၂ဝ၁၈ အကုန်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ်ရင် ၂ဝ၁၉ အစောပိုင်းမှ delivery ရောက်ရှိမှာပါ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေအထားအရ လူငယ် အကြိုက်ဘက်ကို ဦးတည်နေပေမဲ့လည်း စတာလင်ပေါင် 200,000 ကျော် နဲ့တန် တဲ့ Super Luxury SUV တစ်စီးတော့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Photo Credit to www.autoexpress.co.uk
လေဆိပ်မှ ဘူတာကြီးအထိ airport shuttle အမြန်ယာဉ်လိုင်းသစ် ယခုလ ၂၅ ရက်မတိုင်ခင် ပြေးဆွဲမည်
Mazda CX-3 Brand New Model Car အသစ်ကို မြန်မာပြည်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့